OFakazi BakaJehova - Beroean Kubhikishwe - JW.org Lombuyekezi
Zonke Izihloko > OFakazi BakaJehova
OFakazi BakaJehova Noma OFakazi bakaJesu? Ukuhlaziywa okuningiliziwe
Isisho esithandwayo saseMexico sithi "ukuba nobudlelwano obuhle noNkulunkulu, ungabeka izingelosi eceleni." Lesi sisho sisetshenziswa ebudlelwaneni babasebenzi ukusho ukuthi inqobo nje uma umuntu enobudlelwano obuhle nabaphathi abaphezulu bezikhundla, abaphathi abaphakathi kungenzeka ...
Umsuka Nemvelo Yemfundiso KaKristu Parousia Njengesimo Esingabonakali
Uyini umsuka weMfundiso KaFakazi KaJehova engobukhona bukaKristu obungabonakali nokuhlwithwa okuyimfihlo?
UJan 4, 2016
Ngezikhathi ezithile kube khona labo abasebenzise isici sokuphawula samaBeroean Pickets ukuthuthukisa umbono wokuthi kumele sime emphakathini futhi silahle ubudlelwane bethu neNhlangano YoFakazi BakaJehova. Bazocaphuna imibhalo efana neSambulo ...
Septhemba 6, 2015
Ungokabani? Yimuphi uNkulunkulu omlalelayo? Ngoba lowo okhothamela inkosi yakho kuphela; umkhonza manje. Ungeke ukhonze onkulunkulu ababili; Womabili la makhosi awakwazi ukuhlanganyela Uthando lwenhliziyo yakho engxenyeni yalo esezayo. Akunjalo noma ngabe awulungile. (Ingoma ye-Ssb 207) sikwenza kubani, njengoba ...
Ukubikwa Okubalulekile kwe-Red Hering
Septhemba 2, 2015
Omunye wabaphawula wethu wagcizelela isikhundla soFakazi BakaJehova maqondana nokubikwa okuphoqelekile kwamacala okuhlukumeza izingane. Ngokuzenzakalelayo, umngane wami omuhle wanginikeza ukuzivikela okufanayo. Ngikholwa ukuthi kukhombisa ukukholelwa okujwayelekile phakathi kuka ...
Ngisanda kuhlanganyela ekuxhumeni ebufakazini bukaMfoweth 'uGeoffrey Jackson phambi kweKhomishani yaseRussia yase-Australia kwiZimpendulo zeSikhungo Ekuhlukumezeni Ubulili Kwezingane nabangane bakhe abambalwa beJW. Ngiphume endleleni yami ukuthi ngingabi ngecala noma ngibe inselelo. Ngi ...
[Umbhali: U-Alex Rover, Umhleli: Andere Stimme] NgoFebhuwari 9, 2014, esikhathini esingaphezu konyaka esedlule, ngabhalela uMeleti: Ngingajabulela inkundla enjenge-jwtalk.net ephethwe kahle kodwa ngenkululeko yokubeka umbhalo ngaphambi kwenhlangano njengomehluko omkhulu. Kepha kungumsebenzi omningi ...
Ukuhlahloka Okuncane Kokwethenjwa
Kwangathi 28, 2015
[Lo mbhalo wanikelwa ngu-Andere Stimme] Eminyakeni embalwa eyedlule, ngenkathi ilungiselelo leSifundo Sencwadi likhanselwa, mina nabanye abangane bami sasixoxa ngemibono yethu yokuthi kungani. Kwakusho ngaphandle kwesizathu ukuthi isizathu sangempela kwakungeyona eyodwa yalezo ezazisencwadini, futhi ...
U-Esteri: INdlovukazi Engaphansi
[Lo mbhalo wanikelwa ngu-Alex Rover] Lapho sifunda ukuthi abaholi bethu benkolo bebengahlali njalo bethembekile kithi, ukuthi izimfundiso ezithile zingqubuzana nalokho okufundiswa yiMibhalo, nokuthi ukulandela lezi zimfundiso empeleni kungasiholela kude noNkulunkulu, bese kuthiwani. ..
Isifundo se-WT: "Ningofakazi Bami"
Septhemba 14, 2014
Umbhalo Wesihloko: “'Nina ningofakazi bami,' kusho uJehova” - Isaya. I-43: 10 ”Lesi sokuqala sokucwaninga okwenzelwe izingxenye ezimbili okuhloswe ngaso ukuqinisa ukukholelwa kwethu kwimvelaphi yaphezulu yegama lethu, oFakazi BakaJehova. Isigaba 2 sithi: "Ngokunikeza lo msebenzi wokufakaza kuqala,"
Ingabe Sihlanganyela Emsebenzini Wokushumayela Osindisa Impilo?
Ngikhuliswe ngikholelwa ukuthi sishumayela umyalezo osindisa impilo. Lokhu akunangqondo yokusindiswa esonweni nasekufeni, kodwa ngomqondo wokusindiswa ekubhujisweni kwaphakade e-Armagedoni. Izincwadi zethu ziwufanisa nomyalezo kaHezekeli, futhi siyaxwayiswa ngokuthi ...
INqabayokulinda yomphakathi kaMeyi 1, 2014, ibuza lo mbuzo njengesihloko sendatshana yayo yesithathu. Umbuzo wesibili ohlwini lokuqukethwe ubuza ukuthi, “Uma bekwenza, kungani bengazibizi ngofakazi bakaJesu?” Umbuzo wesibili awukaze uphendulwe ngempela ku ...
Igama Lethu Elilodwa
Ekufundweni kwami ​​kweBhayibheli kwansuku zonke lokhu kweqa kimi: "Kodwa-ke, makungabikho noyedwa kini ohlupheka njengombulali noma isela noma umenzi wobubi noma ukugxambukela ezindabeni zabanye abantu. 16 Kepha uma umuntu ehlupheka ngokuba ngumKristu, makangabi namahloni , kodwa makaqhubeke ekhazimulisa uNkulunkulu ...
Ubulungu bunamalungelo Akhe
[Kunemibono eqondakalayo futhi eshukumisa ingqondo ngaphansi kweposi ethi “The Devil's Great Con Job” engenze ngacabanga ukuthi ubulungu bebandla buhlanganisani ngempela. Lokhu okuthunyelwe kungumphumela.] "Ubulungu bunamalungelo abo." Lokhu akukhona ukukhangisa kuphela ...
AmaNjiva angenacala Nezinyoka Eziqaphile
Kube nokuphawula okumbalwa okuhle kakhulu okwenziwe ngaphansi kokuthunyelwe kuka-Apholo, “Umfanekiso” ngesimo abaningi ababhekene naso ebandleni njengoba benza ulwazi lwabo abasanda kuluthola baziwe abanye. UFakazi KaJehova ongenacala, osanda kuguqulwa angahle angacabangi ...
Khumbula Labo Abakufundisile
Lapho sinokungabaza mayelana nokufundisa okuthile ezincwadini zethu, sikhuthazwe ukuthi sikhumbule ukuthi ngubani esiye safunda kuye wonke amaqiniso amangalisayo aseBhayibhelini osezehlukanisa nathi. Isibonelo, igama likaNkulunkulu nenjongo kanye neqiniso ngokufa kanye ...
I-CT Russell Hits Isondele Ekhaya
Kwangathi 27, 2013
U-Apholo wadlulisela lokhu okuthathwe kwiStudies in Scriptures, Umqulu 3, amakhasi 181 kuya ku-187. Kula makhasi, umfowethu uRussell uchaza ngemiphumela yehlelo. Njengofakazi, singafunda lesi sibonelo esihle kakhulu sokubhala okucacile, okufingqiwe bese sicabanga ukuthi sisebenza kanjani ku ...
Abaningi benu bebebhala ngasekupheleni kwesikhathi ukuxoxa ngalokho enikubona kuyisimo esiphazamisayo. Kwabanye kubonakala sengathi kugxilwe kakhulu kwiNdikimba Ebusayo. Singabantu abakhululekile. Sikugwema ukukhulekelwa kwezidalwa futhi siyabadelela abantu abafuna ...
Uyini Indima Yomoya Ongcwele Ekuthuthukisweni Kwezimfundiso?
[Lokhu ekuqaleni bekungumbono owenziwe nguGedalizah. Kodwa-ke, ngenxa yobunjalo bayo kanye nokucela ukuphawula okwengeziwe, ngikwenze kwaba okuthunyelwe, ngoba lokhu kuzothola ithrafikhi eningi futhi kuholele ekushintshaneni okwandayo kwemicabango nemibono. - Meleti] I ...
Zonke Izinto Ezenza Ukugwinya
Abanye bafike bangabaza isisusa sethu sokuxhasa le nkundla. Silwela ukuqonda okujulile ngezihloko ezibalulekile zeBhayibheli, sivame ukungqubuzana nemfundiso esungulwe ekhishwe yiNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova. Ngoba kukhona ...
Lapho uJesu ethusa izixuku, futhi ngokusobala nabafundi bakhe, ngenkulumo yakhe yokuthi badinga ukudla inyama yakhe nokuphuza igazi lakhe, kwasala abambalwa kuphela. Labo abambalwa abathembekile bebengayiqondi incazelo yamazwi akhe njengoba abanye bengazi, kepha banamathela ...
Izimpisi ezingutsheni zezimvu
UJan 30, 2013
Ukuphawula kukaJomaix kungenze ngacabanga ngobuhlungu abadala abangabubangela lapho behlukumeza amandla abo. Angizenzi ngathi ngiyasazi isimo umfowabo kaJomaix abhekene naso, futhi angikho sesimweni sokukhipha isahlulelo. Kodwa-ke, kunezinye izimo eziningi ...
Vikela Ukuhlola UJehova Eenhliziyweni Zakho
Okuthile okukhathaza kakhulu kwenzeke izolo ezinhlelweni zangoLwesihlanu zomhlangano wesigodi walo nyaka. Manje, bengiya emihlanganweni yesifunda iminyaka engaphezu kwe-60. Iningi lezinqumo zami ezingcono, ezishintsha impilo-ukuphayona, ukukhonza lapho kunendingeko enkulu khona…
OFakazi BakaJehova neJalimane LamaNazi - Isikhumbuzo Se-75th
Ake sinikeze isikweletu lapho kufanele khona isikweletu. Siphakathi kwabokuqala, uma kungebona abokuqala, ukwazi nokusola uHitler namaNazi ngalokho ababeyikho. Lokhu sikwenze ngokungesabi nangokungaxegi. Ngenkathi uPapa okhona esaqeqeshwa njengomunye wentsha kaHitler, sasi ...
Umlando Omfushane Wokucabanga Okuzimele
Kwangathi 28, 2012
[Eminyakeni ethile emuva, umngani omuhle wahlanganyela nami ngalolu cwaningo futhi ngangifuna ukulwenza lutholakale lapha njengoba ngangicabanga ukuthi lungazuzisa abanye. - Meleti Vivlon] Ukucabanga okuzimele yigama engingalithandi njalo. Isizathu esisodwa indlela okungabonakala ngayo ngo ...